Laba-cirifoodka waa marka aad qabto isbedbedelka daran in niyadda. Cuntanta niyadda u daran yahay marka ay aad u murugo badan oo aad u faraxsan. Taas ayaa ka dhigaysa adag tahay si aad u hesho nolol xasilloon oo ururka.
Dadka qaba cudurka laba-cirifoodka leedahay wax badan oo isbedel dabeecadda. Tusaale ahaan, waxaan dareemayaa aad u murugo badan laba bilood ah oo ay u adag tahay si ay u shaqeeyaan. Markaas dareemaan farxad iyo bilaabaan badan oo wax loo sameeyo, sababtoo ah waxay leeyihiin wax badan oo tamar.
Haddii ay taasi kugu dhacdo, waxaa laga yaabaa inaad cudurka laba-cirifoodka, oo waxaad la hadli kartaa dhakhtarkaaga oo ku saabsan siyaabaha ay u caawin.
Haddii aad qabto cudurka laba-cirifoodka, waxa aad dareemi kartaa mid aad u niyad-jab. Murugada waa marka aad dareento in aad u murugo badan ma aad samayn karto wax caadi ah. Qaar ka mid ah waxyaalaha aad dareemi kartaa ama aad dareento markaad ku niyad-:
Dareemid daal aad
Hurdada oo aad u badan ama ma seexan karo
Qabashada badan, ama ma doonayaan in ay cunaan
Waxaa ku adag inay fiiro
Ka fikir naftaada ku dhinteen
Ha ku raaxaysan howlaha aan u jeclaan isticmaalo
dareen The ee xadgudubka ama xun xitaa haddii aadan wax qalad ah samayn
Haddii aad qabto cudurka laba-cirifoodka, ay la'eg tahay kulmi doonaan. ay la'eg tahay marka aad dareemaan farxad iyo leedahay tamar badan. Qaar ka mid ah waxyaalaha aad dareemi kartaa ama waayo-aragnimo marka aad maangal loop a:
Waxaad leedahay tamar badan
Dareemayaa ugu faraxsanahay
Seexda ka yar sidii caadiga ahayd
La hadal aad u badan oo deg deg ah
Bixiya wax lacag aad u badan oo ku saabsan waxyaabaha aadan u baahnayn
Wuxuu ka qalin jeer iyo dhacdooyin badan
Waxaad badbadiyay isku kalsoonaanta. The isku kalsooni waa oversized marka aad u malaynaysid inaad tahay ka wanaagsan iyo ka muhiimsan caadiga ah. Tusaale ahaan, aad u malaynaysid inaad tahay sarreeyaan sidaa daraadeed waxa aan dhaawici kara. Ama aad u malaynayso inaad aad u tayo badan oo caan ah.
Waxaad leedahay uunu u weyn. U wayn waxay ka dhigan tahay oo aad u ballaaran. Saarneyn waa marka aad u malaynayso in ay wax dhab ah marka aan si fiican u. Waxaad noqon kartaa uunu u weyn marka aad u malaynaysid inaad tahay aad u xoog badan oo muhiim ah si ay u ma yeeli karaan. Haddii aad u malaynayso in aad aan la yeeli karin, idinkuna waxaad samaysaan wixii khatar ah si dabiici ah ma samayn.
Waxaad u baahan tahay in ay dhacdo nixiyay iyo dhacdo manic dhakhtar si go'aan in aad qabto cudurka laba-cirifoodka. Dad badan oo qaba cudurka laba-cirifoodka leeyihiin qaraabo ah oo kale oo uu leeyahay cudurka laba-cirifoodka.